Madaxweynaha jubaland oo la kulmay xubno ka socda Guddiga Difaaca Baarlamaanka Kenya (Daawo Sawirada) – STAR FM SOMALIA
Hogaamiyaha Maamulka Jubbaland ayaa Magaalada Kismaayo, wuxuu kula kulmay Xildhibaano ka socda Guddiga Difaaca Baarlamaanka dalka Kenya oo Kismaayo gaaray.
Xubnahan ayaa aqalka Madaxtooyada Kismaayo kula kulmay Axmed Madoobe, waxaana ay ka wada hadleen arimaha ku aadan howlgalka ciidanka Kenya ee Somaliya iyo dib u soo celinta Qaxootiga Somaliyed ee dalka Kenya ku nool.
Xildhibaanada ka socda Guddiga Difaaca Baarlamaanka dalka Kenya, ayaa Madaxweyne Axmed Madoobe waxa ay u sheegeen in Kenya ay go’aan ku gaartay in la xiraayo Xeryaha Dhadhaab ee dalka Kenya.
Sidoo kale waxa ay sheegeen Kismaayo inay ka mid tahay meelaha la qorsheeyay in dib loogu soo celinaayo Qaxootiga laga soo celinaayo Xeryaha Dhadhaab.
Xubnaha ka socday Guddiga Difaaca Baarlamaanka dalka Kenya ayaa sidoo kale booqday goobaha ay ku sugan yihiin ciidamada Kenya ee Kismaayo.
Sidoo kale waxa ay booqdeen Dekada Magaalada Kismaayo iyo goobo kale oo ciidamada KDF ay ka howlgalaan.